အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး သရဲအိမ် ( ၇ ) ခု – DHN NEWS
၁ The Dent Schoolhouse
ဒီသရဲအိမ်ကိုတော့ ဂျုံစက်ဟောင်းတစ်ခုပုံစံဆောက်လုပ်ထားပြီး Freedy Krueger ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအခြေပြုကာ ဖန်တီးတည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင် ချာလီ နဲ့ သူသတ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာ ကျောင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာခြောက်လှန့်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. The 13th Gate
လူသတ်လူရွှင်တော်တွေ ၊ တစ္ဆေပူးနေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ မြွေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီအိမ်ကြီးကအိမ်မက်ဆိုးကောင်းကောင်းပေးစွမ်းနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုပဲ 13 gate ဟာဆိုရင် မှောင်မဲနေတဲ့ မြေအောက်လှိုင်ခေါင်းလိုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ special effect တွေနဲ့ ဟောလိဝုဒ်အဆင့်မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဖွဲ့သားတွေလည်း အလွန်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာ အလွန်အမင်းဆိုးရွားလွန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။မြူဆိုင်းတာ ၊ပိတ်းပိန်အောင်မှောင်တာမျိုး ၊ရေတွေကျလာတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကို လာထိတာမျိုးတွေတောင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လူတစ်ယောက်ကို အရှင်လတ်လတ်အရေခွံနွှာနေတဲ့ အခနိးမျိုးကိုလည်း ဖြတ်သန်းသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတော်လေးစိတ်ခိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
၄. Haunted Hoochie at Dead Acres
အိမ်ထဲဝင်ခဲ့သူတစ်ယောက်အပြောအရတော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ကို လွှစက်နဲ့ ထိခါနီးထိကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့သိရပါတယ်
၅. Cutting Edge
ဒီအိမ်ကတော့ အတော်ရှည်လျားတဲ့ သရဲအိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တစ်လျောက် တစ်နာရီကျော်လမ်းလျောက်ရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်တိုင်းမှာ ကြောက်စရာမျိုးစုံဖန်တီးထားတဲ့ဘအခန်းတိုင်းကို ဖြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆. Freakling Bros: Gates of Hell
ဒီနေရာကတော့ အလွန်ကို ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဒရွတ်တိုက်ဆွဲသွားပြီး ပါးစပ်မှာမီးတောက်နေတဲ့လူရွှင်တော်တွေကလည်း ဝိုင်းကိုက်ကြပါသေးတယ်။ဒါကိုတော့ ငရဲသား အတွေ့အကြုံလို့ သူတို့ကပြောကြပါတယ်။
၇. McKamey Manor
ဒီအိမ်ကိုတော့ ပါးစပ်နဲ့လက်ကို တိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး အတွင်းမှာ သွေးတုတွေစင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် အိမ်ထဲက အရာတွေကြောင့် အဝတ်တွေစုတ်ပြဲသွားနိုင်ချေလည်းရှိပါသေးတယ်။လူတော်တော်များများကတော့ မအော်ဟစ်ပဲနဲ့ ခရီးဆုံးထိမသွားနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီသရဲအိမျကိုတော့ ဂြုံစကျဟောငျးတဈခုပုံစံဆောကျလုပျထားပွီး Freedy Krueger ရဲ့ဇာတျလမျးကိုအခွပွေုကာ ဖနျတီးတညျဆောကျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ဇာတျလမျးထဲမှာဆိုရငျ ခြာလီ နဲ့ သူသတျခဲ့တဲ့ကလေးတှဟော ကြောငျးကွီးတဈခုလုံးမှာခွောကျလှနျ့နကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
လူသတျလူရှငျတျောတှေ ၊ တစ်ဆပေူးနတေဲ့ ကလေးတှနေဲ့ မွှတှေနေဲ့ကွုံတှခေ့ငျြတဲ့သူတှအေတှကျတော့ ဒီအိမျကွီးကအိမျမကျဆိုးကောငျးကောငျးပေးစှမျးနိုငျမယျ့နရောတဈခုပဲ 13 gate ဟာဆိုရငျ မှောငျမဲနတေဲ့ မွအေောကျလှိုငျခေါငျးလိုနရောတဈခုဖွဈပွီးတော့ special effect တှနေဲ့ ဟောလိဝုဒျအဆငျ့မိတျကပျပွငျဆငျထားတဲ့အဖှဲ့သားတှလေညျး အလှနျကိုကွောကျမကျဖှယျကောငျးလှပါတယျ။
ဒီအိမျထဲကိုဝငျမယျဆိုရငျ ၁၈ နှဈပွညျ့ပွီးသူတဈယောကျဖွဈရမှာဖွဈကွောငျးလကျမှတျရေးထိုးရပါလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အိမျထဲမှာရှိတဲ့အရာတှဟော အလှနျအမငျးဆိုးရှားလှနျးတဲ့အရာတှဖွေဈတာကွောငျ့ပါပဲ။မွူဆိုငျးတာ ၊ပိတျးပိနျအောငျမှောငျတာမြိုး ၊ရတှေကေလြာတာမြိုးနဲ့ ကိုယျ့ကို လာထိတာမြိုးတှတေောငျရှိနိုငျပါတယျ။ ထို့အပွငျ လူတဈယောကျကို အရှငျလတျလတျအရခှေံနှာနတေဲ့ အခနိးမြိုးကိုလညျး ဖွတျသနျးသှားရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အတျောလေးစိတျခိုငျဖို့လိုအပျပါလိမျ့မယျ။
အိမျထဲဝငျခဲ့သူတဈယောကျအပွောအရတော့ ကိုယျ့ခွထေောကျကို လှစကျနဲ့ ထိခါနီးထိကွုံခဲ့ရပါတယျလို့သိရပါတယျ
ဒီအိမျကတော့ အတျောရှညျလြားတဲ့ သရဲအိမျပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိမျတဈလြောကျ တဈနာရီကြျောလမျးလြောကျရမှာဖွဈပွီး အခြိနျတိုငျးမှာ ကွောကျစရာမြိုးစုံဖနျတီးထားတဲ့ဘအခနျးတိုငျးကို ဖွတျသှားရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောကတော့ အလှနျကို ကွောကျစရာကောငျးလှနျးတဲ့နရောတဈခုပါပဲ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လူတဈယောကျကို ဒရှတျတိုကျဆှဲသှားပွီး ပါးစပျမှာမီးတောကျနတေဲ့လူရှငျတျောတှကေလညျး ဝိုငျးကိုကျကွပါသေးတယျ။ဒါကိုတော့ ငရဲသား အတှအေ့ကွုံလို့ သူတို့ကပွောကွပါတယျ။
ဒီအိမျကိုတော့ ပါးစပျနဲ့လကျကို တိတျနဲ့ပတျပွီးတော့ ဝငျရမှာဖွဈပွီး အတှငျးမှာ သှေးတုတှစေငျတာမြိုးကွုံတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ထို့အပွငျ အိမျထဲက အရာတှကွေောငျ့ အဝတျတှစေုတျပွဲသှားနိုငျခလြေညျးရှိပါသေးတယျ။လူတျောတျောမြားမြားကတော့ မအျောဟဈပဲနဲ့ ခရီးဆုံးထိမသှားနိုငျခဲ့ကွပါဘူး။
Previous Article တမလွန်က သင့်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ပြတဲ့ လက္ခဏာ (၇) ရပ်
Next Article သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ၏ အလွန်ဖတ်သင့်သော ဆုံးမစကား